रिपब्लिकन पार्टीको बिजय भन्नु भन्दा पनि यो आवाज गरिबको आवाज हो ! - Enepalese.com
रिपब्लिकन पार्टीको बिजय भन्नु भन्दा पनि यो आवाज गरिबको आवाज हो !
इनेप्लिज २०७३ कार्तिक २५ गते ११:३६ मा प्रकाशित
अमेरिकन जनता भोकै बसेर अब बोका पाल्ने काम हुदैन ! सत्य हो आज सम्म अमेरिकन जनताले तिरेको कर तीजको दर खाए जस्ता अवस्य हुदैन ! अमेरिका बाट आएको अनुदान मात्र है भुकम्प पीडितका नाउमा उठाएको डलर समेत खान सक्नेहरुलाई आर्थिक सहायता मात्र होइन अमेरिकन भूमिमा टेक्न समेत मुस्किल हुनेछ !
बिस्व राष्ट्र बाट आर्थिक अनुदान र सहयोगको हिसाब -किताब गर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल सुन्दर मात्र होइन सान्ति क्षेत्र नेपाल हुने थियो !
४५ औ अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गरिबको पिडा र धनीको अहंकार समेतलाई बुज्न सक्ने क्षमता छ ! the America Great Again !! भन्नु मतलब नागरिक सक्षम हुनु पर्छ भन्ने आसय हो ! सक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकामा गरिबी बढेको कुरा एक दन्ते कथा होइन यो बडो गम्भीर समयका रुपमा बढेको कुरा बेवास्था गरेको हुदा आज ट्रंपको उदय भएको कुरा प्रस्ट छ !
सरकार धनि हुदैमा जनता धनी हुदैन ! अमेरिकन सरकार जनतालाई कर थोपरेर वासिंटनमा मस्ती गरेको प्रतिफलको रुपमा रिपब्लिक पार्टी आज वासिंटनको हकदार भएको छ !
यो बिजयलाई रिपब्लिकन पार्टीको बिजय भन्नु भन्दा पनि यो आवाज गरिबको आवाज हो ! दिन भरि करायो दक्षिणा हरायो ! दिनभरी ८ घण्टा श्रम गर्यो सरकारलाई कर भर्दा गोजी खाली आखिर कहिले सम्म चल्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको १० बर्षमा आज हलचल मचिएको छ मानौ मेरो भाबना अमेरिकन समाज सग मेल खाएको छ !